Ndị na-emepụta ngwa ahịa ngwaahịa - Ndị na-ebunye ngwa ahịa ngwaahịa na ụlọ ọrụ China
Nkume Nkume bu ihe eji emeghari ma na-akowa okike okike okike di nma ma obu ihe eji achọ mma. Tụnyere igwe anaghị agba nchara 3D iberibe ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ 3D iberibe mere nke ceramik, iko, plastic wdg, eke nkume Wapụtara ngwaahịa na-ịna ahịa maka nkecha & kpochapụwo echiche. Kemgbe ọtụtụ afọ nke usoro ọrụ aka na-ejikọ ọganihu ọhụụ nke teknụzụ CNC, ngwaahịa ndị a na-egosipụta na ọ na-ekpughe ọmarịcha ọgbara ọhụrụ ya na ọmarịcha ihe ochie.
Marble Inlay agbasawanyewo ịma mma nke ngwaahịa marble. Iji mee ihe mara mma nke mabul inlay ngwaahịa, anyị kwesịrị apụ a elu àgwà otu nke imewe na shopdrawing, nke a bụ elementrị ma oké mkpa nzọụkwụ. Ndị otu anyị zụrụ azụ ma nwee ahụmịhe hụ na ọ bụghị naanị na anyị na-ebubata data n'aka onye ahịa, mana anyị nwekwara ikike nke imewe, ma ugbu a na-enye ọfụma foto dabere na imewe iji nweta nchikota kachasị mma nke agba ma mee ka shopdrawing ahụ sie ike iji hụ na atụmanya na ngwaahịa akọwapụtara nke ọma. Isi ihe nke abụọ dị mkpa bụ igwe igwe jet. Igwe dị elu ma dị mma nke ọma enweghị obi abụọ na isi ike maka ngwaahịa dị mma ma dịkwa mma. Nke ato, onye ọrụ anyị maka ụgbọ mmiri mmiri CNC gụrụ akwụkwọ ọ bụghị naanị otu esi ejizi igwe ahụ, kamakwa njirimara dị iche iche nke ụdị okwute. Ndị ọrụ a nwere ọrụ, na nghọta zuru oke na nghọta nke ọrụ a na-ekenye ha bụ ndị isi nwoke maka ngwaahịa zuru oke. Maka inble marlay, ịhọrọ ọtụtụ okwute, akara milimetre ọ bụla maka nsonaazụ ikpeazụ.
E nwere ike iji mosaic marble laa azụ puku afọ gara aga n'akụkọ ihe mere eme nke mmadụ. Ọrụ ya bụ mgbatị nke echiche ụmụ mmadụ. Ọ nwere ike ịdị ike dịka nwatakịrị nwanyị; ọ nwere ike ịdị ka oge gboo dịka afọ nke ụwa; ma o nwere ike ịbụ ihe siri ike dịka ihe osise Da Vinci. Ije ije site n'oge ochie rue oge nke oge a, ọ gafere ihe nketa nke ọdịbendị mmadụ na mmụọ ya, ma n'oge a, ọ ka bụ otu n'ime ngwaahịa ndị ọkachasị asọpụrụ nke ndị na-ese ihe na ndị ọrụ njedebe.
Nkume Nkume bu ihe eji emeghari ma gosiputa nkpuru osisi di egwu na udi okike. Tụnyere nke oge a igwe anaghị agba nchara 3D iberibe ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ 3D iberibe mere nke ceramik, iko, plastic wdg, eke nkume Carvings ngwaahịa na-kpọrọ maka nkecha & kpochapụwo echiche. Site na puku afọ nke nchịkọta usoro ọrụ aka na-ejikọ nkà na ụzụ, ngwaahịa ndị a na-egosipụta na ọ na-ekpughe ọmarịcha ọgbara ọhụrụ ya na ọmarịcha ihe ochie.